अन्तरास्ट्रिय – Nepal Online Khabar
काठमाडौं : चिनियाँ राजधानी बेइजिङ संसारकै बढी अर्बपतिहरू बस्ने सहर बनेको छ। फो'र्ब्स म्याग'जिनले प्रका'शित गरेको संसारका अर्बपतिको सूचीमा परेकामध्ये १ सय जनाल बेइजिङका बासिन्दा छन्। ती मध्ये ३३ जना अर्बपति यसपालि मात्रै थपिएका हुन्। बेइजिङपछि अमेरिकाको न्युयोर्क सहर छ। त्यहाँ ९९ जना अर्बपति बस्छन्। सात वर्षयता न्युयोर्क नै धेरै अर्बपति भएको सहरमा पहिलो नम्बरमा थियो। चीनले को'रोनाभाइ'रसमाथि गरेको प्र'भावकारी निय'न्त्रण, प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरू बिस्तार र सेयर मार्केटमा भएको सुधारले चिनियाँ अर्बपति थपिएका हुन। बेइजिङमा अर्बपतिहरू थपिए पनि न्युयोर्कका अर्बपतिहरूसँग बेइजिङका सबै अर्बपतिको भन्दा ८०अर्ब डलर बढी सम्पत्ति छ। चीनमा (हङकङ र मकाउसमेत) यस वर्ष २ सय १० जना अर्बपति थपिएका छन्। यीमध्ये आधा भन्दा बढीले उत्पादनमूलक र प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीका मालिक हुन्। चीनकी अर्बपति मह
बधाई ! युएईमा कार्यरत नेपाली वेटरलाई एक किलो सुन उपहार !
युएई : यहाँको एक मनी एक्सचेन्जबाट पैसा पठाउँदा एकजना नेपालीले एक किलो सुन उपहार पाएका छन् । अल अहलिया ए'क्सचेन्ज मा'र्फत पैसा पठाउँदा इलाम ४ जमुनाका नरेन्द्र मगरलाई एक किलो सुन उपहार परेको छ । गएको १६ मे बाट १४ जुलाईसम्म चलाइएको समर सर'प्राइज अफर अन्तर्गत पैसा पठाउनेमध्ये एक जनालाई मेघा ड्र मार्फत एक केजी सुन उपहारको व्यवस्था गरिएको थियो ।आइतबार भएको ड्र मा २ वर्षदेखि युएईको ट्रा'न्सगार्ड कम्पनीमा वेटरको रुपमा कार्यरत नरेन्द्रलाई उपहार परेको एक्स'चेञ्जका अप'रेसन हेड कमल सुब्बाले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो । आबुधाबीको इले'क्ट्रा शाखामा स्थानीय प्रशासनका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा कम्प्युटर प्रणाली मार्फत ल'क्की ड्र गरिएको थियो । नरेन्द्रले गएको १२ जुनमा बरदुबईमा रहेको एक्स'चेन्जको शाखाबाट सात सय दिर्हाम नेपाल पठाएकाे ए'क्सचेन्जका नेपाल प्रमुख बेनीमाधब ढकालले बताउनुभयो । उपहार पाएको सु
Mar52021 by Nepal KhabarNo Comments
अमेरिकाले कामदार (ए’चवान बी भिसा) खुल्ला गरेको छ ।आर्थिक बर्ष २०२१ का लागि खुल्ने उक्त भिसाका लागि तो’किएको अ’वधिभित्र आ’वेदकले अनलाइन द’र्ता गराउनु पर्नेछ । नेपाली समय अनुसार फागुन १८ गते देखि चैत्र ७ गते दिउँसो १२ बजेदेखिसम्म द’र्ता गर्ने समय तो’किएको छ । आर्थिक बर्ष २०२१ का लागि खुल्ने उक्त भिसाका लागि तो’किएको अवधिभित्र आ’वेदक र उनीहरुका प्र’तिनिधिहरुले आ’वेदक र ला’भग्राहीको विवरण भरेर अनलाइनमार्फत दर्ता गराउन सक्नेछन् । हरेक द’र्ताका लागि युएससीआईएसले क’न्फर्मेशन नम्बर उपलब्ध गराउनेछ । उक्त नम्बर र’जिस्ट्रेशन ट्र’याक गर्ने प्र’योजनका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ । तर उक्त नम्बर के’स नम्बर नभएका कारण यु’एससीआईएसको के’स स्टाटस हेर्न भने प्रयोग हुनेछैन ।आवेदक वा प्र’तिनिधिले अनलाइनमार्फत द’र्ता गराउनका लागि यु’एससीआइएसको अनलाइन ए’काउन्टको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । साथै १० डलर आ’वेदन शुल्क
काठमाडौं : ए’सिड आ’ क्रमणमा परेकी बीरगञ्जकी मुस्कान खातुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय साहसी महिला (आ’ई’ डब्ल्यू’ओसी) पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको छ । ते'जाब ह'मला अन्त्यतर्फ लक्षित उनको कार्यका लागि सो पुरस्का'र प्रदान गर्ने निर्ण'य गरिएको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ । प्रेम प्रस्ताव अस्वी'कार गरेको भन्दै एक किशोरले मुस्कानलाई वीरगन्जमा २०७६ सालमा ए'सिड आ'क्रमण गरेका थिए । अमेरिकी प्रथम महिला जिल बाइडन र विदेश मन्त्री टोनी ब्लिंकनले ८ मार्च’मा एक भर्चु’ अल कार्यक्रमको आयोजना गरी पु'रस्कार प्रदानको औपचारिक घोषणा गर्ने छन् । प्रायजसो ठूलो व्यक्तिगत जो’खिम र त्यागमा शान्ति, न्याय, मानव अधिकार, लैं'गिक समानता र महिला स'शक्तीकरणको वकाल'त गर्ने तथा असाधारण साहस र नेतृ'त्व प्रदर्शन गरेका विश्वभरका महिलाहरुलाई अमेरिकाले आ’ ई’डब्ल्यू’ ओसी पुर'स्कारले सम्मान गर्दछ । अघिल्ला वर्षमा पा
Feb222021 by Nepal KhabarNo Comments
पाँच सैनिकको बि’भत्स ह’त्या
Posted in Hot News, अन्तरास्ट्रिय
रासस–सिन्ह्वा: पाकिस्तानको दक्षिणी वजिरिस्तान जिल्लाको सुरक्षा जाँच चौकीमा भएको आक्रमणमा पाँच सैनिकको मृ'त्यु भएको छ । सुरक्षा अधिकारीहरुका अनुसार दक्षिणी वजिरिस्तानको जवार पोस्टमा बिहीबार राति आक्रमण भएको र त्यसबाट पाँच सैनिकको मृ'त्यु हुनुका साथै अर्का एक सैनिक गम्भीर घा'इते भएका छन् । सेनाले उक्त इलाकामा थप सैनिक परिचालन गरी आक्रमणकारीको खोजी कार्यलाई तिब्र बनाएको जनाएको छ । उक्त आक्रमणको जिम्मेवारी पाकिस्तानी तेहरिक–ए–तालिबानीले लिएको छ । अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिएको दक्षिणी वजिरिस्तान हतियारधारी विद्रोहीहरुको गढका रुपमा चिनिन्छ । तर सरकारले व्यापक सैनिक परिचालन गरी त्यस क्षेत्रमा सक्रिय विद्रोहीलाई निस्तेज बनाउँदै लगेको छ । तैपनि, विद्रोहीहरुले बेलाबखत उक्त क्षेत्रमा तैनाथ सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्ने गरेका छन् । यसै महिनाको शुरुमा पनि दक्षिणी वजिरिस्तानमा सुरक्ष
ऐजेन्सी: आफूलाई राजनीतिक विश्लेषक भनी चिनाउने एक महिलाले उच्च अदालतकी न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवालालाई क'ण्डमको प्याकेट पठाएकी छन्। भारतको गुजरातमा बस्ने देवश्री त्रिवेदी नामक ती महिलाले न्यायाधीश गनेडीवालाका विवादास्पद फैसलाले समाजमा रहेका अपराधीहरूमा गलत सन्देश प्रवाह गरेको भन्दै क'ण्डम पठाएकी हुन। १२ वर्षीया बालिकाको कपडा नखोलिकन स्तन समात्ने पुरुषलाई छालाले छाला छोइएको थिएन भन्दै सफाइ दिइन् र त्यसको विरोधमा क'ण्डम पठाएको गनेडीवालाले बताइन। त्रिवेदीले १२ वटा प्याकेटमा १५० वटा क'ण्डम प्याक गरेको यूट्युब भिडियो पनि अप्लोड गरेकी छन्। ती प्याकेट उनले उच्च अदालतमा अनि न्यायाधीशको सरकारी निवासमा समेत पठाएकी छन्। त्रिवेदीले गनेडीवालाका विवादास्पद फैसलाको विरुद्ध अभियान शुरू गर्ने घोषणा पनि गरेकी छन्।
Jan232021 by Nepal KhabarNo Comments
सिरियाको माइनस २० डिग्री तापक्रममा ड्युटी गर्दै नेपाली सेना…हेर्नुहोस् ।
काठमाण्डौ : नेपाली सेनाले सिरियाको अत्यन्तै चिसो मौसममा पनि कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विच्छेदन पर्यवेक्षक बल (यूएनडी ओएफ) अन्तर्गत रहेर नेपाली शान्ति सैनिकहरूले मध्यपूर्वी राष्ट्र सिरियाको अति संवेदन शील माउण्ट हर्मनको २० फिटको हिउँ र माइनस २० डिग्री सेल्सियस चिसो कठ्याङ्ग्रिँदो सिरेटोमा पनि ड्युटी निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् । यस क्षेत्रको स्वामित्वको विषयलाई लिएर विगत ४६ वर्षदेखि सिरिया र इजरायलबीच विवाद कायम रहेकाले शान्ति सैनिकहरू तैनाथ गरिएका छन। विश्वको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा शान्ति सैनिक तैनाथ भएको माउण्ट हर्मन क्षेत्रमा अहिले पनि ठूलो सङ्ख्यामा विद्यु तीय धरापहरू छन् भने द्व'न्द्वरत सशस्त्र समूहको चलखेल बढेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । झण्डै ६ महिना हिमपात हुने गोलान क्षेत्रमा खटिने नेपाली सैनिकले मुस्ताङ जिल्लाको कैसाङ उच्च शिखर तालिम शिक्षालयबाट हिमाल
Jan102021 by Nepal KhabarNo Comments
मैले मेरी प्यारी छोरी र मेरो पैसा सबै गुमा'एँ ।’ पति पत्नी दुवैले गरेर महिनामा ३११ पाउण्ड कमाउने यो दम्पतीले छोरीलाई बेलायत कमाउन पठाउनको लागि तस्क'रहरुले मागेको ३० हजार पाउण्ड जुटाएर दिएका थिए एजेन्सी। बेलायतमा कन्टेनरभित्र ज्यान गुमा'एका ३९ जना आप्रवासीमध्ये एक आफ्नी छोरीसमेत भएको लगभग पक्का भएपछि भियतनामका मातापीडाले आफ्नो पीडा पोखेका छन् । यो घटनामा कन्टेनरभित्र चिसोमा थुनिएर ३९ जनाले ज्यान गुमा'एका थिए । तीमध्ये एक भियतनामकी फाम थी ट्रा मी पनि भएको मानिएको छ । उनले आफ्ना मातापितालाई मंगलबार राती आफू म’र्दैछु भन्दै निकै हृ’दयविदारक म्यासेज पठाएकी थिइन् । मीकी आमा गुएन थी फोङ र पिता फाम भान थिनले आफ्नो पीडा पोखेका छन् । सिएनएनसँगको एक अन्तरवार्तामा उनका पिता फामले भने ‘मैले मेरी प्यारी छोरी र मेरो पैसा सबै गुमाएँ ।’ पति पत्नी दुवैले गरेर महिनामा ३११ पाउण्ड (४५ हजार नेपाली रुपैयाँ
Dec172020 by Nepal KhabarNo Comments